Koox Ganacsato iyo Aqoon yahano u badan oo ku dhawaaqey Xisbi Siyaaseedka Cusub oo lagu magacaabo Midnimo – idalenews.com
Waxaa Urur siyaasadeedkii saddexaad ee bishan gudeheeda la furo looga dhawaaqay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari shalay oo Talaado ahayd. Ururkan oo magaciisu yahay [Midnimo] waxaa ku bahoobay in badan oo kamid ah aqoonyahanka iyo ganacsatada waaweyn ee Puntland.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in Munaasabad ay dad badani kasoo qayb galeen oo ka dhacday hoolka shirarka ee Hotel Jubba ayaana si rasmi ah loogu shaaciyey furitaanka ururka Midnimo iyo weliba ahdaaftiisa siyaasadeed.
Wuxuuna mar uu warfidiyeenada la hadlayey sheegay: “in ururka Midnimo uu yahay urur siyaasadeed oo mucaarad ah islamarkaana yoolkiisa ugu weyni uu yahay sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo horumarka Puntland”.
Dhinac akale ururada siyaasadda ee Puntland ayaa ku tartami doona doorashooyinka goleyaasha deegaanka, waxaana sadexda urur ee ugu codadka bata loo aqoonsan doonaa sadexda xisbi ee rasmiga ah haddii amuurtaasi suurto gasho.